Cali Maxamed Geedi oo ol-ole ugu jira xilka Rayslwasaaraha Soomaaliya – idalenews.com
Muqdisho(INO)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada latashiyo xooggan oo ku aadan qofka noqonaya raysalwasaaraha Soomaaliya. Sida uu qabo Dastuurka Madaxweynuhu waxa uu haystaa muddo 30 maalmood ah kadib marka xilka loo dhaariyo in uu ku magacaabo Rayslawasaare haddii aan baarlamaanku xiliga u kordhin.
Warar Idale News Online heleyso ayaa sheegaya in siyaasi Cali Maxamed Geedi uu ka mid yahay magacyada safka hore ku jira in ay qabtaan xilkaas, waxaana uu ol-ole ka dhexwadaa Xildhibaanada iyo weliba siyaasiyiinta kale ee isaga ku dhaw. Qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa u arka Cali Maxamed Geedi nin dheelitir u sameyn kara siyaasadda cusub ee dalku qaadey. Dad badan oo ka soo horjeeda in xilkaas Cali Geedi loo magacaabo ayaa jira kuwaas oo ku sababenaya xiriirka uu la wadaago dalalka deriska gaar ahaan Itoobiya oo ciidamo xooggan Soomaaliya soo gelisey xiligii hore ee uu ahaa raysalwasaaraha, haddana ku fashilantey farogelintii ay ku haysey doorashada Soomaaliya.